Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: မုန်တိုင်းကိစ္စနဲ.စပ်လျဉ်း၍ ခိုးဝှက်ထားသော အလှူငွေများပြန်ပေးပါ
နာဂစ်မုန်တိုင်းကာလမတိုင်ခင်ကလဲ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလ သမဂ္ဂဆိုင်ရာ ရုံဌာနအများစုက ဒေါ်လာနှင့် အက်ဖ်အီစီ ငွေလဲလှယ်နှုန်းကြောင့် ၁၅ ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ဆုံးရှံးခံနေပြီသာဖြစ်ပါသည်၊ ဒါပေမဲ့။ သတင်းကတော့၊ Inner City Press ဆီရောက်လာပြီး အသေးစားငွေကြေးစီမံကိန်း လို.ခေါ်သည့် ကုလသမဂ္ဂဖွံ.ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ အနိမ့်ဆုံးငွေလဲလှယ်နှုန်းကို လက်ခံထားသဖြင့် ယင်ကိစ္စနဲ.ပတ်သက်၍ ယူအန်ဒီပီအနေနဲ. တုံ.ပြန်ချက်ပေးဖို.ငြင်းခဲ့သည်၊ ယူအန်ဒီပီက မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဒေါ်လာတွေပေးပြီး ပြည်တွင်းသုံးကျပ်ငွေကိုအနိမ့်ဆုံးလဲလှယ်နှုန်းဖြင့်ရယူပါသည်၊ယူအန်ဒီပီအနေနဲ.ဒေါ်လာနှင့်အက်ဖ်အီစီဘယ်လောက်လဲလှယ်ခဲ့တာ၊ ဘာဈေးနှုန်းနဲ.လဲခဲ့တာတွေကိုအခုအချိန်အထိဘာမှထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါ၊
ယင်ကိစ္စနဲ.ပတ်သက်၍ ယူအန်ဒီပီ စီမံခန်.ခွဲမှုတာဝန်ခံ Kemal Davis ကို Inner City Press က မေးလိုက်သည်၊ သူက၊ လမ်အကြားမှာမေးတဲ့မေးခွန်းကို ကျနော် မဖြေဘူးလို. ပြန်ပြောသည်၊သူကနွေရာသီအကုန်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပေးကောင်းလုပ်ပေးနိုင်မည် လို. ထင်ပါရဲ.၊ အများစုက အရမ်းနောက်ကျတယ်လို. သတ်မှတ်တယ်သတဲ့။
UNITED NATIONS, July 25 -- As news of the currency exchange losses the UN accepted in Myanmar belatedly spreads, legislators in many donor countries which responded to the UN's appeals for Cyclone Nargis humanitarian assistance are preparingademand that the "stolen" aid money be returned by the Than Shwe government. Meanwhile, the UN cannot or will not provide basis information about how much of the donated money it exchanged into devalued Foreign Exchange Certificates. Two weeks ago, Inner City Press requested this figure from the UN Development Program, which handles UN system finances, but beyond an admission that UNDP buys FECs through the Myanmar Foreign Trade Bank, no dollar figure has provided.